‘स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्दो‘ डा. अम्बुज कर्ण  Sourya Online
‘स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्दो‘ डा. अम्बुज कर्ण
सौर्य अनलाइन २०७४ चैत १९ गते ९:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दो रूपमा पाइएको छ । त्यसमा पनि फोक्सो, स्तन, आमाशय, पाठेघर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीहरूको चाप बढी नै देखिएको छ । क्यान्सरको प्रकोप, जोखिम बढ्दो छ, त्यसैअनुसार क्यान्सर पत्ता लगाउने प्रविधिको पनि विकास हुँदै गएको छ । पहिले पहिले जस्तो उपचार गर्न कठिनाई अहिले छैन । रोग लागेको छ भने चाँडै नै उपचार गर्नुपर्छ । उपचार गर्ने पद्धतिको विकास हुँदै गएकाले क्यान्सर लाग्दैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था अहिले छैन ।
नेपालकै पुरानो र ठूलोसमेत रहेको सरकारी अस्पताल हो वीर अस्पताल । यहाँ विभिन्न रोगका बिरामीहरू उपचारमा आउने गरेका छन् । तर, जति बिरामी आउँछन् ती सबै अन्य अस्पतालमा उपचार गरेर निको नभएपछि आउनेहरूको संख्या अधिक रहेको छ । यसरी अन्य अस्पतालबाट ठीक नभएपछि आएका अधिकांश बिरामीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक हुन्छ । त्यसमा पनि क्यान्सरका बिरामीको अवस्था त रोगले पुरै जगडिसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपचार पनि नलाग्ने अवस्था हुन सक्छ ।
सुरुको अवस्थामा क्यान्सरको पहिचान गरेर उपचार हुन सकेमा निको हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । मानिसको आहार, विहार तथा अन्य क्रियाकलापले गर्दा क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोग लाग्न सक्छ । क्यान्सर शरीरका जुनसुकै भागमा लाग्न सक्छ । त्यसमा पनि अस्पतालमा आएका क्यान्सर रोगीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या पनि कम छैन । अहिलेको युगले मानिसलाई धेरै सचेत बनाएको छ । पहिलेका मानिसलाई यसबारेमा त्यति ज्ञान नभएर उपचारतर्फ नलागेका पनि हुन सक्छन् ।
तर, अहिले स्तनमा गाँठागुँठीको शंका लाग्ने बित्तिकै चिकित्सिकमा पुगी हाल्छन् । त्यहाँमाथि पनि आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि वेलावेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने महिलाको संख्या पनि कम छैन । क्यान्सर नसर्ने रोग हो तर, यो रोगले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई समाज, देश र सारा विश्वलाई नै चुनौती थपिरहेको छ । जुनसुकै उमेरका मानिसलाई शरीरका सबै अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ । महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । स्तनमा नयाँ मासु वा गाँठो आएर अनावश्यक रूपमा बढ्यो भने त्यो स्तन क्यान्सर हो ।
क्यान्सर हुँदैमा डराउने, आत्तिने गर्नु हुँदैन त्यसका लागि जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हामीले दैनिक सागसब्जी र फलफूल बढी खाने, जंकफुड, तारेको र भुटेका खाद्यवस्तु कम खाने गर्नुपर्छ । स्तन क्यान्सर पुरुषमा पनि हुन्छ । हजार जना पुरुषहरूमध्ये एक जना पुरुषलाई स्तन क्यान्सर लाग्दछ । पुरुषमा हुने स्तन क्यान्सर शून्य दशमलव १ प्रतिशत हुन्छ । कलेजोको कारणले हुने गरेको क्यान्सर नै पुरुषमा हुने स्तन क्यान्सर हो ।
गलत रहनसहन र खानपिन क्यान्सर लाग्नुको प्रमुख कारण हो । स्तन क्यान्सर सहरीया महिलाहरूमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कोही आफ्नो सुन्दरमा कमी आउने डरले त कोही व्यस्थ जीवनले गर्दा आफ्ना बच्चलाई सहरीया महिलाहरु बच्चालाई स्तनपान कम गराउँछन् । जसले गर्दा दूध गानिन गई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावन बढ्न जान्छ । ज्यादै मोटोपना र सन्तान उत्पादन नगर्ने महिलाहरूमा पनि यो रोग भएको पाइन्छ ।
सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर हुँदा केही नहुने वा लक्षण नै देखा पर्दैैन । स्तनमा गिर्खा भए पनि नदुख्ने भएकाले थाहा हुँदैन । त्यसैले ४० वर्ष कटेपछि नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । सन्तान जन्माउन असमर्थ र जन्माएर पनि स्तनपान नगराउने महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । जुन महिलाको महिनावारी छिटो वा सानो उमेरदेखि नै सुरु भएको हुन्छ र महिनावारी (मेनोपज) लामो समयपछि मात्र सकिन्छ, त्यस्तालाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
नियमित व्यायाम नगर्ने, पिल्स खाने महिलालाई क्यान्सर जोखिम हुन्छ । तथ्यांकमा ४० र ५० वर्षपछि मात्रै स्तन क्यान्सर बढी देखिन्छ । तर, अहिले ४० वर्ष नै नपुग्दै स्तन क्यान्सर बढी देखिएको छ । युवावस्थाका (२०–३०) वर्ष उमेरका महिलामा पनि देखिएको छ । स्तनको आकारमा परिवर्तन आएमा जाँच गर्नुपर्छ ।
दूधको निप्पल (मुन्टा) बाट रगत बग्ने, पानी बग्ने, पिप बग्नेजस्ता लक्षण देखिए तुरुन्छ चिकित्सककोमा जानुपर्छ । स्तन क्यान्सर हुँदा काखीमा गिर्खा आउन सक्छ । क्यान्सर अन्य अंग फोक्सोमा फैलियो भने खोकी लाग्ने र छाती दुख्ने हुन्छ भने हड्डीमा फैलिँदै जाँदा हाड दुख्छ । टाउकोमा फैलिँदा टाउको दुख्ने, वान्ता आउने लक्षण देखिन्छ ।
महिनाको एकपटक आफैँ स्तन छाम्ने वा वर्षका एकपटक विशेषज्ञसँग सल्लाह लिने गर्नुपर्दछ । जाँच गर्दा महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । किनभने महिनावारी भएको बेलामा स्तन कडा हुन्छ र परीक्षण गर्दा थाहा नहुने सम्भावना बलियो रहने गर्दछ । मेमोग्राम (स्तनको एक्स–रे गर्ने विशेष प्रकारको मेसिन) बाट नियमित चेकजाच गर्ने गर्नुपर्दछ । जसले क्यान्सरको सुरुको अवस्थासहित स्तनमा भएको गाँठासमेत पत्ता लगाउँछ ।
यसैगरी गलत खानपानका कारण पेटमा रहेका विभिन्न अंगमा समेत क्यान्सरको खतरा रहने गर्दछ । पेटमा हुने क्यान्सर मध्ये विशेषगरी आमाशयमा हुने गर्दछ । यस्तै आन्द्रा, फोक्सो, कलेजोमा पनि क्यान्सरको सम्भावना अत्याधिक हुने गरेको छ । आन्द्रा, कलेजो, आमाशयको क्यान्सरको लक्षणका रूपमा खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने हुन्छ । क्यान्सरको प्रमुख लक्षण नै सुरुमा खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने हो । आमाशय क्यान्सर हुँदा पेट दुख्ने, वान्ता आउने लक्षण देखापर्दछ ।
त्यस्तै आन्द्रा क्यान्सर हुँदा दिशामा रगत जाने र दिशाको रङ नै बदलिएर दिशा कालो हुन्छ । कलेजो क्यान्सर भएको बिरामीमा जन्डिस देखियो भने त्यो फैलिसकेको र बढी जोखिम अवस्था हो । मद्यपान, धूमपान गर्ने, हेपाटाइटिस भएको व्यक्तिलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले चनाखो हुनुपर्छ । परिवारमा अरू सदस्यलाई क्यान्सर भएको छ भने पनि सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । खानपिन, आनीबानी, रहनसहनमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने क्यान्सर हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
३० देखि ४० प्रतिशत क्यान्सर दैनिक गतिविधि, खानपिन (मद्यपान, धूमपान) ले हुन्छ । नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, सागपात, फलफूल बढीभन्दा बढी खाने, जंकफुड कम खाने, सेकुवा, भुटन, आगोमा पोलेर बनाइएको मासुको परिकार कम खानुपर्छ । पोलेको मासु आन्द्रा र खाना नलीको क्यान्सर गराउने मूख्य कारण हो । क्यान्सर भएको सुरुको स्टेजमा पत्ता लगाउन सक्यो भने ९९ प्रतिशत निको बनाउन सकिन्छ । क्यान्सर हुनेबित्तिकै त्यसको उपचार नै नहुने र मृत्यु भइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।
पोलेको मासुले बढी जोखिम
खानानलीको क्यान्सर गराउने मूख्य कारण भनेको पोलेको मासु हो । विशेषगरी पोलेको मासुले आन्द्रा र खाने नलीको क्यान्सर हुन्छ । त्यसैले पोलेको मासु खानबाट जोगिन सकियो भने क्यान्सर हुनबाट पनि बच्न सकिन्छ । पोलेको मासुमा केमिकल हुन्छ, फ्याट मासु आगोमा पकाइन्छ त्यसले केमिकल उत्पादन गर्छ । त्यो केमिकलले आन्द्राको भागमा क्यान्सर हुने तत्वहरूलाई बढवा गर्छ । त्यसले क्यान्सर बन्ने तत्व बनेको बनेकै गर्छ त्यसले गर्दा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
क्यान्सर वंशानुगत हुने भएकाले समय समयमा उपचार गराई बच्न सकिन्छ । क्यान्सरको प्रकोप, जोखिम बढ्दो छ यो नराम्रो÷डरलाग्दो पक्ष हो । क्यान्सर उपचार गर्ने प्रविधिको पनि विकास भएकाले सबैले बेलाबखतमा चेकअप गराउनुपर्छ । वीर अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ तथा सहायक प्रोफेसर डा. कर्णसँग सौर्य दैकिककी यसिमा महतले गरेको कुराकानीको अंश
‘संगीतकारलाई नोकरी अभिशाप’
फ्ल्युड आर्टिस्ट रूमिना
संकटमा पनौती संग्रहालय
मुकुण्डोमा रमाएका सुरज
तेस्रो मेडिकल एक्स्पो सुरु